musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Scarlett Johansson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Scarlett Johansson Biography inoratidza chokwadi nezve yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Karsten Johansson naMelanie Sloan Johansson), Hupenyu Hwemhuri, Kudanana / Hupenyu hupenyu, Murume (Colin Jost), Mwanasikana (Rose Dorothy Dauriac).
Moreso, Actress's Siblings (Adrian Johansson, Hunter Johansson, Vanessa Johansson, naChristian Johansson), Lifestyle, Mubhadharo, mambure akakosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Mumashoko akareruka, basa redu ndere kuburitsa pachena zvakadzama zveiyo American Actress uye Singer. Iyi yehuori biography inotanga kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika pakuve anozivikanwa.
Kuti uratidze hunyanzvi hwehupenyu hwako, Tazviona zvakakodzera kuunza kwauri zvinoitika kubva panguva dzaakatanga muhupenyu kusvika ave zita remumba. Pazasi payo pikicha inopfupikisa Scarlett Johansson's Biography, hupenyu hwake hwepakutanga, kune rake rebudiriro nyaya.
Scarlett Johansson Biography - Tarira Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Hongu, isu tese tinomuziva kubva kumba kwake kwega 3 mu1993 uye achangopfuura Avengers: Endgame mu2019.
Zvisinei nezvaakaita, takaona vanhu vazhinji vasinganyatsonzwisisa nyaya yeupenyu hwake. Naizvozvo, isu takafunga kuti zvine hungwaru nemufaro wese kukuunzirai inonakidza ngano yaScarlett Johansson uye nekuparara kwehupenyu hwebasa rake. Saka, pasina kumwezve kunonoka, ngatitangei.
Scarlett Johansson yehucheche nyaya:
Kune ekutanga Biography, iye ane zita remadunhurirwa rekuti - ScarJo. Scarlett Ingrid Johansson akauya munyika ino musi wa22 Mbudzi 1984 kuna amai vake, Melanie Sloan Johansson nababa, Karsten Johansson, muManhattan, New York City, United States.
MuAmerican Star Actress akauya munyika semapatya uye mwana wekupedzisira pakati pehama dzake ina (Adrian Johansson, Hunter Johansson, Vanessa Johansson, naChristian Johansson). Ava vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake (Karsten Johansson naMelanie Sloan Johansson), inoratidzwa pazasi.
Tarira vabereki vaScarlett Johansson - amai vake, Melanie Sloan Johansson nababa vake, Karsten Johansson.
Semwana, Scarlett Johansson akatanga kufarira basa mukutaridzika kubva achiri mudiki. Iye aidzidzira kuita nekutarisa mugirazi kusvikira azviwonesa kuchema, achida kuve akafanana naJudy Garland.
Pix yekutanga yaScarlett Johannson aine munin'ina wake mapatya, Hunter nababa vavo, Karsten Johannson.
Kutyaira kwake kwekuita kwaive kusingaperi. Pamakore manomwe, akarwadziwa apo mumiririri wetarenda akasaina mumwe wehama dzake pachinzvimbo chake. Vabereki vaScarlett Johansson vakaparadzana aine makore 13. Saka Johansson akasvika padhuze nambuya vake amai, Dorothy Sloan.
Ambuya vake amai vamai vake vaiwanzoisa rwiyo pamwe nekutamba maitiro enhengo dzemhuri. Aifarira jazz maoko uye yemitambo theatre. Saka, Scarlett Johansson aifanira kutora zvidzidzo mutop tamba. Anotsanangura hudiki hwake seyakajairika.
Mufananidzo wehucheche waScarlett Johansson.
Scarlett Johansson Mhuri Yemamiriro:
Iyo firimu uye modhi-mutambi baba, Karsten Olaf Johansson, aimbove ari mugadziri apo amai vake, kunyangwe vari maneja webhizinesi, vaingogara pamba kuti vachengete vana vashanu.
Nekudaro, imba yanga iine mashoma zviwanikwa zviripo panguva yekukura. Vakatambura mune zvemari kuchengetedza hupenyu hwakanaka uye kuzadzisa izvo zvinodikanwa zvemba. Izvo zvakakosha senge chikafu, mbatya uye pekugara; kunyangwe dzidzo yakanga isingawanikwe.
Iyo yekutanga pix yemhuri yaJohannson.
Baba vaScarlett Johansson, Karsten Olaf Johansson, mugadziri. Zvichakadaro, sekuru vababa vake, Ejner Johansson, aive munyori wezvematongerwo enyika, munyori wezvekunyora, uye director director. Fembera izvo zvinotsanangura, mukuwedzera, kuti kufarira kwake kwakakura sei pakutanga.
Scarlett Johansson Mhuri Kubva:
Iyo nyeredzi mutambi akaberekerwa muManhattan, New York City, United States. Iye mutsva yorker. Zvisinei, baba vake, Karsten Olaf Johansson, vanobva kuCopenhagen, Denmark. Panguva baba vake baba vababa, Ejner Johansson, aive nababa veSweden.
Zvichakadaro, amai vake, Melanie Sloan, ndeyeNew Yorker. Akashanda semugadziri uye anorumbidza kubva kumhuri yeAshkenazi yechiJuda kubva kuPoland neRussia, anonzi Schlamberg pakutanga.
Yakataura kuti mukutsvaga kwekutsvaga midzi yaScarlett Johansson, mhuri yababa vake sekuru vakafa paHolocaust muWarsaw Ghetto mu2017.
Tinogona kutaura kuti mutambi uyu ndewe dual Citizenship; iye ari maviri American uye Danish. Nekudaro, iye anosarudza kuzivikanwa sechiJuda. Pasi peichi chinyorwa-mufananidzo unopa ruzivo rwemidzi yake.
Mepu inoratidza mhuri yaScarlett Johansson.
Scarlett Johansson Ekutanga Basa:
The American Actress uye muimbi anobva mutsetse murefu wevanogadzira maartist. Sekuru vake veDanish vakashanda semunyori uye director, uye amai vake gare gare semugadziri wefirimu.
Nekudaro, rake basa rakatanga nekukurumidza uye rakakura nekukurumidza. Aifarira kuita, uye mimhanzi yemitambo yaive yekuda. Nekudaro, mutambo uyu wakanyanya kudanirwa nekufamba kwenguva.
Semwana, amai vaScarlett Johansson, Melanie Sloan Johansson, uyo anoda mafirimu, aigara achitora Scarlet kuti aone mafirimu. Saka, makore masere apfuura, amai vake vakamuita kuti atore chikamu muma Auditions.
Mutambi weAmerican Actress muCinema aive pa9.
Mutambi weAmerican Actress muCinema aive na9. Iye akaonekwa mumutambo "Kumusoro" (1994), kwaakashanda semwanasikana waJohn Ritter. Johansson aigara achishuvira kuve mutambi kubva pazera diki.
Rinenge gore gare gare, akaridza chinzvimbo chemwanasikana waSean Connery naKate Capshaw muvhi bhaisikopo "Just Chikonzero." zvinyorwa. Tinogona kuti amai vake vakamukwevera mukuita hunyanzvi.
Scarlett Johansson Dzidzo:
Scarjo munhu akangwara. Aive nechivimbo chekuita zvisingaite zvesimba. Johansson akanyoresa kuPS 41, chikoro chepuraimari muGreenwich Village, Manhattan.
Ipapo, akanyoresa kuLee Strasberg Theatre Institute uye akatanga kuongorora kuongororwa kushambadziro asi nekukurumidza akarasikirwa nechido. Iye akabva achinjisa tarisiro yake kufirimu uye kumitambo.
Iyo Lee Strasberg Theatre uye Firimu Institute, uko Johansson akadzidza kuita semwana.
Uye ndokuenderera mberi kutsvaga mabasa uye kudzidza kuManhattan's Professional Vana Chikoro (PCS). Chikoro chikoro chega chega chekudzidzisa chinozivikanwa nevakakurumbira vanoita alumni saCarrie Fisher, Rita Moreno naSarah Michelle Gellar. Aive mumwe weavo vana vejazz-ruoko.
Scarlett Johansson Biography - Mugwagwa unoenda Mukurumbira:
Iye anoyevedza Actress uye muimbi akawana kuzivikanwa nekuda kwekuita kwake muManny & Lo (1996), Iyo Horse Whisperer (1998), uyezve Ghost World (2001).
Semutambi anofarira, Johansson akachinjira kumabasa evakuru muna 2003 nemitambo yake mufirimu, Yakarasika muShanduro, iyo yakamupa mubairo weBAFTA we Best Actress. Pamakore gumi nemapfumbamwe, akazove pakati pevakakunda mudiki pane vese mubairo.
Akave akasarudzwa kuGolden Globe Awards nekutamba achiri kuyaruka ari kunetsekana mumutambo unonzi, Rwiyo Rwerudo rwaBobby Long (2004) padivi nemunyengeri mune anonakidza wepfungwa Match Point (2005).
Mamwe mabasa ake panguva iyi anosanganisira Match Point (2005), kwaakafadzwa nekushanda pamwe nemutungamiriri wemafirimu, Woody Allen. Moreso, kuita kwake kunosanganisira The Prestige mu2006 uye Vicky Cristina Barcelona (2008), kwaakatamba chimwe cheanofarira Javier Bardem's hunhu hwakatarisana naPenélope Cruz.
Scarlett Johannson, achishanda nemukurumbira director director, Woody Allen.
Scarlett Johansson Biography- Kumuka Mukurumbira:
Shure kwaizvozvo, akadzidza mimwe mitauro uye akajairana nevamwe vatambi vakapihwa kuchengetedza mutambo wake. Kugona kwake kugona kwakamupa mubairo weBIFA weKunakira Performance neActress mukusarudzwa kweBritish Independent Firimu.
Johansson akawana ake maviri ekutanga Academy Mubairo kusarudzwa kweMhando yepamusoro Yekutsigira Actress uye Akanakisa Actress kune yake Yekuroora Nyaya uye Jojo Rabbit matambiro. Akagamuchirawo mazita eBAFTA emafirimu uye kusarudzwa kweGolden Globe kune yekare.
Kugona kwake kugona kwakamupa mubairo weBIFA weGood Performance.
Iye anozivikanwa nekuda kwehunhu hwake hweChirikadzi Chirikadzi muMarvel Cinematic Universe (Iron Man 2, The Avengers, Captain America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Wemauto Soldier, Captain Marvel, Avengers: Endgame, Avengers : Infinity War, Chirikadzi Dema).
1. Pfupiso yemubhaisikopo rake rekuita kubva panguva dzekutanga kusvika zera ramakore makumi matatu nemana.
Johansson achadzokorora basa reChirikadzi Yakasviba mune yake yega solo prequel firimu inotungamirwa naCate Shortland, iyo yakave yakarongerwa kuburitswa muUnited States uye kuburikidza neDisney + nePremier Access pazuva re9 Chikunguru 2021.
Scarlett Johannson achiridza muBlow Chirikadzi.
Scarlett Johansson Biography - Mumhanzi Basa.
Muna 2006, Scarlett Johansson akanyora rwiyo "zhizha" naGeorge Gershwin, iunganidzwa yenziyo dzakanyorwa neveHollywood vatambi. Dambarefu rake rekutanga rakaburitswa pazuva ra20 Chivabvu 2008, rakanzi "Kwese Kwandinoisa Musoro Wangu". Iyo albam yakagamuchira ongororo dzakavhenganiswa uye ndokutumidzwa zita rekuti 23st album yepamusoro yegore ra2008.
Muna 2009, akarekodha kavha rwiyo rwekupedzisira "Kwakanaka." Zvakare, muna 2010 bhendi reSimbi Chitima rakaburitsa rwiyo rwunotyisa Thrills Vol. 1, apo Scarlett Johansson akadudzira rwiyo "Bullet."
Muna 2009, akarekodha kavha rwiyo rwekupedzisira "Kwakanaka."
Kwegore ra2015, akaumba pop band Singles, pamwe naEste Haim, Holly Miranda, Kendra Morris naJulia Haltigan, vaakaburitsa rwiyo urwu muna Kukadzi wegore iro, "Candy."
Kunyangwe achiedza kuita Nyenyedzi kubva pakuimba, Zvinosuruvarisa, Scarlett Johansson anowira muchikamu chevanozivikanwa-vanoita avo vakaedza asi vakakundikana muindasitiri yemimhanzi.
2. Nei Scarlett Johansson's Music Basa Risina Kumira
Scarlett Johansson Biography - Rudo Hupenyu:
Zvino ngatitaurei nezverudo; Paaipinda chikoro cheProfessional Children's School, Scarlet akambodanana nemumwe waaidzidza naye Jack Antonoff kubva 2001 kusvika 2002. Akadanana zvakare nemubati-nyeredzi Josh Hartnett kweanenge makore maviri kusvika pakupera kwa2006. parutivi.
Johansson akatanga hukama nemutambi Ryan Reynolds muna 2007. Ivo vaviri vakapinda muna Chivabvu 2008 uye vakaroora munaGunyana muna Vancouver Island. Vakarambana muna Chikunguru 2011.
Zvekare, Johansson akatanga kufambidzana nemurume wechiFrench Romain Dauriac, muridzi wesangano rekushambadzira, munaNovember 2012. Vakatovimbisana munaGunyana anotevera.
Johansson naDauriac vakasunga pfumo muna Gumiguru muPhilipsburg, Montana. Vaviri ava vakazvara mwana musikana anonzi mwanasikana Rose Dorothy mu2014. Zvisinei, vakarambana munaGunyana 2017.
3. Isingazivikanwe Chokwadi ChaScarlett Johansson Rudo Hupenyu.
Achiramba kukanda mapfumo pasi, akatanga hukama neMugovera Night Live co-musoro munyori uye Weekend Gadzirisana mubatiri Colin Jost muna Chivabvu 2017. Ivo vakavimbiswa muna Chivabvu 2019 uye vakaroora muna Gumiguru 2020 kuNew York. Pazasi pane pfupiso kuratidzwa kwehupenyu hwake hwerudo kusvika ikozvino.
Scarlett Johansson nerudo rwehupenyu hwake, Colin Just.
Zvimwe pamusoro pemwanasikana wake:
Mumwe chete mwana uye mwanasikana wemuDanish muimbi ndiRose Dorothy Dauriac. Iye akazvarwa kubva kumubatanidzwa waScarlett Johansson uye wechiFrench Romain Dauriac. Iye ari kuchikoro chepamusoro panguva yekunyora uku uye zvigunwe mutsetse webasa raamai vake.
Scarlett Johansson akatakura mwana wake mumwe chete, Rose Dorothy Dauriac.
Scarlett Johansson Hupenyu Hwemhuri:
Kunyangwe paine kwavo kwakaderera kwemari, Scarlet akanakidzwa nerutsigiro ruzere kubva kunhengo dzemhuri yake. Iye aifanirawo kunge akaunganidza hupfumi hwechiitiko kubva kwavari.
Kunyanya muzukuru wake, uyo aivewo mukuita hunyanzvi. Ngatitorei ino nguva yekutaura zvakadzama nezve yega yega.
Zvizhinji nezveScarlett Johansson Baba:
Baba vevashandi vemuAmerican - Karsten Olaf Johansson. Ndiye mugadziri nehunyanzvi kubva kuDenmark uye kubvira ipapo akaramba achitsigira Scarlet kunyangwe akarambana naamai vake, Melanie Sloan.
Kurambana kwake naMelanie Sloan kurambana kwake kwechipiri mushure mekuroora kwake kwekutanga kwakabereka Mwanakomana. Nekudaro, Karsten Olaf Johansson naMelanie Sloan vaive nevana vana pamwechete. Kubva maari Scarlet nemukoma wake, Hunter Johansson, mapatya.
Pixi yababa vaScarlett Johansson; Karsten Olaf Johansson.
Zvizhinji nezveScarlett Johansson Amai:
Tinogona kutaura kuti kubudirira kwaScarlet kune rudo rwaamai vake rweindasitiri yemamuvhi. Anonzi Melanie Sloan. Aive Melanie ndiye akaendesa Scarlet kuCinemas uyezve kutora chikamu muma Auditions. Iye muNew Yorker uyo akashanda semugadziri uye anorumbidza kubva kumhuri yeAshkenazi yechiJuda.
Pixi yaScarlett Johansson naamai vake, Melanie Sloan.
Zvimwe Zvakawanda Pamusoro paScarlett Johansson Vanun'una:
Iyo inonakidza Actress inotora chinzvimbo chekupedzisira nehama yayo mapatya, Hunter Johansson. Iye ane hanzvadzi yakura, Vanessa Johansson, vatatu mukoma, Adrian Johansson, Hunter Johansson, uye Christian Johansson. Ngatitarisei kune mumwe nemumwe wevakoma vake.
Mufananidzo wehudiki waScarlett Johannson nevanin'ina vake.
Nezve Scarlett Johansson Sista - Vanessa Johansson:
Zvakare, mutambi wechikadzi ndiSista waScarlett Johansson - Vanessa Johansson. Ndiye wekutanga uye wedangwe mwana waamai vaScarlet, asi kwete Baba. Sezvo baba vake, Karsten Olaf Johansson aive nemwana muwanano yake yekare.
Anofanirwa kunge akavewo kurudziro uye sosi yeruzivo neruzivo kuti abudirire mukuita uye mumhanzi basa, zvichiteerana. Pazasi payo pikicha yekutaridzika kwake.
Nezve Scarlett Johansson's Mukoma - Adrian Johansson:
SaMwanakomana wekutanga weScarlet amai, Adrian Johansson aifanirwa kupinda mubhutsu dzababa. Sezvo vabereki vavo (Karsten Olaf Johansson naMelanie Sloan) vakaparadzana. Iwe haufanire kushamisika kana ariwo muindasitiri yevaraidzo.
About Scarlett Johansson's Mukoma - Hunter Johansson:
Mubairo-unokunda American Actress mapatya, sezvatotaurwa pamusoro apa. Hunter Johansson ihama yake mapatya. Chisungo chavo chaizove chakasimba semapatya; sezvo ivo vaifanira kugovana rinenge hupenyu hwavo hwese hwehudiki. Ivo vaviri vakatora chinzvimbo chekupedzisira sevana muImba.
Mukoma waScarlett Johansson - Hunter Johansson.
About Scarlett Johansson's Mukoma - Christian Johansson:
Sezvatakambotaura pakutanga, baba vaScarlets, Karsten Olaf Johansson, anga akaroora asati asangana naMelanie Sloan. Aive nemwanakomana muwanano yake yekare, anonzi Christian Johansson. Iye ndiye Nhanho-Mukoma kuna Scarlet.
Zvizhinji nezve Scarlett Johansson Hama:
Anodakadza uye ane hunyanzvi hwekutamba zvirokwazvo ane babamunini, vazukuru, babamunini, babamunini, vanatete, nasekuru nasekuru. Asi, zvinosuruvarisa, ruzivo diki ruripo pamusoro pavo. Ambuya vaScarlet vanga vari kuwedzera kune rake basa rinobudirira.
Nguva pfupi yapfuura vabereki vaScarlett Johansson (Karsten Johansson naMelanie Sloan), Scarjo akasvika padyo nambuya vake amai, Dorothy Sloan. Aive muchengeti wemabhuku uye mudzidzisi; vaiwanzopedza nguva vari pamwe chete, uye Johansson aifunga Sloan shamwari yake yepamwoyo.
Scarjo naambuya vake amai, Dorothy Sloan.
Scarlett Johansson Hupenyu hweMunhu:
Kune mutambi ane mukurumbira, kuita uye kuimba harisi basa rekuita raramo chete. Scarlet anonakidzwa nemitambo yake uye anoda kuimba nekutamba mukuwedzera. Aipedza yakawanda yenguva yake achiona zvekurapa zvinyorwa, saka angave ari dermatologist dai asiri iye mutambi.
Iyo Scorpio zodiac muKristu uye inonakidzwa nekuzorora neshamwari uye teerera kumimhanzi. Ane fan fan inokura inotevera pasocial media.
Scarlett Johansson Mararamiro:
Luxury inodhura kwazvo kune mukadzi anozivikanwa-uye anokwezva mukadzi ane akawanda mahedheni uye inoenderana mari mabhenefiti. Scarlett Johansson anoda mota dzinoyevedza nedzimba. Johansson anogara uye ane imba muPalisades, New York, uye Los Angeles kubva muna Gumiguru 2018.
Scarlett Johansson Imba:
Ane imba muNew York, Hamptons neLos Angeles. Muna 2015, Scarlett Johansson akatenga imba yepamusoro muLos Feliz munharaunda yeLos Angeles. Iyo imba yemhando yepamusoro inosvika madhora mazana mana. Iine dziva rinotonhorera rinotonhorera, rakaisa sunfufu pasherefu, spa, poolside cabana, uye yakanaka inotonhorera yekudyira.
imba yepamusoro muLos Feliz nharaunda yeLos Angeles inokosha madhora mazana mana.
Iyo hombe Scarlett Johansson mambure akakosha akapa rusununguko rwekutenga mashoma Akanaka, mota dzinoyevedza. Mamwe acho anosanganisira BMW Z4, Mercedes E-Kirasi, uye Toyota Prius.
Pachikepe naye BMW Z4.
Scarjo ndiye mutambi wepasirose-akapihwa mari yepamusoro mu2018 na2019; pamusoro pezvo, akaonesa kakawanda paForbes Celebrity 100 runyorwa. Iye mafirimu akakurisa kudarika $ 14.3 bhiriyoni pasirese, zvichiita kuti Johansson ave wepamusoro-anotora Mutambi uye wepfumbamwe-wepamusoro-anotambira bhokisi hofisi nyeredzi yenguva dzese
Scarlett Johansson ari mumwe wevanobudirira kwazvo kuAmerican Performers. Kwayakanyanya sosi yemari yake kunobva pane rake rakabudirira basa muFirimu neMimhanzi Indasitiri. Sekureva kwaForbes ine mari yekukwereta inosvika madhora zana nemamiriyoni zana nemakumi masere kubva muna 165. Pamusoro pezvo, Scarlett Johansson akaita $ 2020 miriyoni muna 56, izvo zvakamuita mutambi wepamusoro-soro anobhadharwa wegore iro.
Mutambi wemuAmerican uye muimbi vanga vaine mamwe maratidziro ebrands ekutsigira nemamwe mashoma emhando huru pasi rose. Tine zvakafanana naCalvin Klein, Louis Vuitton, L'Oreal, Dolce & Gabbana uye SodaStream. Akasainawo kondirakiti yekuenzanisira neakakurumbira fashoni brand, Mango.
Scarlett Johansson Untold Chokwadi:
Asides kubva pane info yataurwa pamusoro, hezvino zvakakosha zvinhu iwe zvausina kumboziva nezve Danish Actress uye muimbi izvo zvinokufadza iwe.
Chokwadi # 1: Yakarasika Umwana:
Uyu akanaka uye anozivikanwa American Actress ane mweya wakaita sewemwana uye saka akambopemberera zuva rekuzvarwa kwake makumi maviri muDisneyland. Zviripachena kuti akarasikirwa nenguva zhinji dzekukura nekuda kwekutanga basa rake kutanga. Vakamuratidzira muTeenage Mutant Ninja Turtles uye vakati anovafarira kupfuura mamwe matambiro ake.
Scarlett Johannson anosarudza iye Teenage Mutant Ninja Turtles ficha pane ese mamwe maitiro ake.
Semunhu weruzhinji, Scarlet anonyanya kufarira philanthropist. Akapa rutsigiro rwake kumasangano akasiyana siyana anoyamura; Dzimwe dzinosanganisira Stand Up To Cancer, Cancer Research UK, Too Many Women (iyo inoshanda pakurwisa gomarara repazamu), uye "USA Harvest" iyo inopa chikafu kune vanhu vanoshaya.
Chokwadi # 3: Hollywood:
Scarlet hunhu hunokwezva. Vamwe vanotomutaurira semukadzi anouraya, kwaakaramba kusimbisa. Runako rwake hazvishamise kuti nei achitaurwa sechiratidzo chebonde muHollywood nenzvimbo dzakasiyana siyana dzekutepfenyura.
Scarlett Johansson Ndiye Mukadzi Wevakadzi Vanonyanya Kuita Zvepabonde muna 2013. Iyo rumbidzo yakanyorawo zita rake muHollywood Walk of Fame pakati pemamwe akawanda mibairo yepabonde yaakapihwa kubva paakatanga basa.
Chokwadi # 4: Modelling basa:
Johansson akaonekwa mumashambadziro ekushambadzira aDolce & Gabbana, Calvin Klein, naLouis Vuitton naL'Oréal uye akamiririra zita reSpain Mango kubvira 2009. Chandon.
Scarlet yakaonekwa isina kupfeka pabutiro remagazini yeVanity Fair padyo nemutambi Keira Knightley uye akapfeka zvizere mufashoni Tom Ford kukurudzira vanhu kuti vachengete muviri wakanaka.
Iko kushama kwakakonzera kumwe kusanzwisisana, sezvo vamwe vaitenda kuti mufananidzo unoratidza kuti vakadzi vanomanikidzwa kuratidzira hupombwe hwavo zvakanyanya kupfuura varume.
Chokwadi # 5: Akadonha Nudes:
Mifananidzo yakashama yaJohansson yakabiwa kubva panharembozha yake yakaburitswa online munaGunyana 2011. Akataura kuti ndivo vaakatumira kune aimbova murume wake, Ryan Reynolds, makore matatu chiitiko ichi chisati chaitika.
Kutevera kuferefetwa kweFBI, muyorori akabatwa, akabvuma mhosva, uye akatongerwa makore gumi mutirongo.
Chokwadi # 6: Zvinoshoresa zvirevo:
Muparidzi wechiFrance, JC Lattès, akataura mazwi ekutuka nezve hupenyu hwake chaihwo mumabhuku, Chekutanga Chinhu Chatinotarisa, chakanyorwa naGrégoire Delacourt. Johansson akabudirira kumhan'arira muparidzi wechiFrance muna2014 uye akatora madhora mazana matanhatu nemasere. Iye anowana mubairo $ 68,000 3,400.
Chokwadi # 7: Zvematongerwo enyika:
Scarlet anga ari mutsigiri anoshingairira hurumende yakanaka uye haana kurega zvematongerwo enyika zvinobatana naye. Akambotsigira Barack Obama uye akatsigira Hillary Clinton muna 2016.
Zvakare, mu2017, akadaro paWomen's Kurume paWashington, achitaura Donald Trump's manejimendi uye kutaura kwaaizotsigira mutungamiri wenyika kana akashandira kodzero dzevakadzi uye akamira kubvisa mari yemubatanidzwa yePlanned Parenthood.
Johansson pa2017 Vakadzi Kurume.
Chokwadi # 8: Scarlett Johansson akarega basa rekushambadzira mushure mekudzorera LGBT:
Mutambi weAvengers Star akatanga kutamba 1970s mukuru wepara mhosva wePittsburgh Dante "Tex" Gill, mukadzi anotapira mumuvhi Rub & Tug. Nehurombo, akagamuchira kushoropodzwa kukuru kubva kunharaunda ye LGBT.
Vatsoropodzi vake vakasimbirira kuti basa raDante Gill raifanirwa kunge rakaenda kune wekunze mutambi. Kunyangwe hazvo sezvaaida mukana, Scarlett Johansson akasiya basa rekushambadzira mushure mekudzokera shure kweLBBT.
Chokwadi # 9: Akanyanya-Actress Contender:
Kunyangwe zvake ari mukuru-achiwana mafirimu enguva dzese, Iyo Avengers, Scarlett Johansson inogadzira inoyevedza mamiriro pamwe neicho chaicho mune ake maviri achangobva kuita. Kunyangwe iri diki-diki firimu, inoita kunge inokwezva kutarisisa pasi rese.
Iwo mafirimu anosanganisira Nyaya Yewanano naJojo Tsuro. Chimwe chikamu chemufirimu chiri nezve hurongwa hwekurambana uye kuti wakakwenudzwa sei. Hazvina mubvunzo kuti hukama hwake hwehukama hwakamuchengetedza ari pamusoro pemutambo wake. Indasitiri yevaraidzo inowanzoona chitsvuku mukwikwidzi weakanakisisa mutambi mumaMovie, Kuroora, uye Kukakavara.
Scarlett Johansson Biography Pfupiso:
Kuti uwane pfupiso yekukurumidza yehupenyu hwake nhoroondo, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveiye anozivikanwa mutambi uye Muimbi.
Scarlett Johansson's Bio Dhata
Zita rizere: Scarlett Ingrid Johansson
Zita rekudanwa: ScarJo
Zuva rekuzvarwa: 22nd Zuva raNovember 1984
Nzvimbo yekuzvarirwa: Manhattan, New York City, United States
Basa: Actress, Muimbi
Dzidzo: Veruzhinji Chikoro 41, Greenwich Village uye Lee Strasberg Theatre Uye Firimu Institute
Amai: Melanie Sloan Johansson
Vanun'una (Vakoma): Adrian Johansson, Hunter Johansson, uye Christian Johansson
Vanun'una (Hanzvadzi): Vanessa Johansson
Murume / Wawakaroorana naye: Colin Jost (m. 2020)
Mwanasikana : Rose Dorothy Dauriac
kukwirira: 5 ft 3 inches (1.6 m)
Net Worth: $ 165 mamirioni approx
Nationality: America, Denmark
Tinovimba wawana Scarlett Johansson Biography uye Yevacheche Nyaya ichijekesa nekuvaraidza. Aive nenguva yakaoma, futi, kunyanya asina zviwanikwa zvakakwana uye kurambana kwevabereki vake.
Zvisinei, pese panenge paine kuda, panogara paine nzira. Kuedza kwake kusingaperi kwakabhadhara, pakupedzisira. Akazvivakira mukurumbira muindasitiri yevaraidzo, uye isu tinotarisira kuti akanakisa achiri kuuya kubva kuna Scarlett Johansson.
Ita zvakanaka kuti ugare wakabatana kune hwakawanda biography chokwadi neiyo yepamusoro-notch kunyatso.